Launcher Live Icons for Android အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
4.5 | 1,000,000+ ထည့်သွင်းရန် | သုံးသပ်ချက်မျာ
ဒေါင်းလုပ် APK（12.0MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Launcher Live Icons for Android
★သက်တောင့်သက်သာရှိသော app အိုင်ကွန်များဖြင့်တစ်ပြိုင်တည်းတင်ထားသောတစ်ခုတည်းသော launcher
★လူကြိုက်များသော application များ icon ၏ထူးခြားသောကာတွန်း
အသုံးဝင်သောစိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိချက်များ★★ icon ကိုသက်ဝင်ကာတွန်းနှင့်အဆက်မပြတ်သတ်မှတ်ပါ။ ★★ Animated Icon Packs and Wallpapers
> သင်၏ဖုန်းပေါ်တွင် app အိုင်ကွန်များပြုလုပ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသော launcher app
"NO!" ဟုပြောပါ သင်၏ပင်မမျက်နှာပြင်တွင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဂိမ်းများ၊ အသုံးအဆောင်များ၊ လက်ငင်းစာတိုပေးပို့သူများနှင့်လူမှုရေးကွန်ယက်များ၏ပျင်းစရာကောင်းသည့် icon များဖြစ်သည်။ သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုပုံစံများ၊ အက်ပ်အတွင်းရှိအဖြစ်အပျက်၊ အဆက်မပြတ်ကာတွန်းရုပ်ပုံများ (သို့) ကာတွန်းမဟုတ်သောအိုင်ကွန်တစ်ခုခုကိုသတ်မှတ်ပါ။
သင်၏မူလမြင်ကွင်းနှင့်အက်ဆေးအံဆွဲထဲမှအက်ပလီကေးရှင်းနှင့်ဂိမ်းအိုင်ကွန်များသည်အမှန်တကယ်အသက်ရှင်လျက် !!! !!!
Launcher live (ကာတွန်း) အိုင်ကွန်အက်ပ်သည်မည်သည့်သက်ရှိနောက်ခံပုံများနှင့်မဆိုအခင်းအကျင်းများထက် ပို၍ အေးသည်။ ၎င်းသည်အလွန်အသုံးဝင်သောအင်္ဂါရပ်ဖြစ်ပြီး osmino Launcher မှသာပေးသောပန်ကာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Home screen တွင် application တစ်ခုကိုအလွယ်တကူရှာတွေ့နိုင်ပြီး၊ ကြီးမားသောဝစ်ဂျက်များမလိုအပ်သောဖြစ်ရပ်များကိုမြင်နိုင်ပြီးသိုလှောင်မှုနေရာနှင့်ဘက်ထရီကိုလောင်ကျွမ်းနိုင်သည်။
osmino Launcher မလိုအပ်သောအင်္ဂါရပ်များဖြင့်ရိုးရှင်းသော၊ ၎င်းသည်လျင်မြန်ပြီး၎င်းတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော launcher tools အားလုံးနှင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့ရန်လွယ်ကူသည်။
Launcher Live icon များသည်သီးသန့် wallpapers များကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးသည်၊ မကြာမီလည်း home screen အတွက် live ကွဲပြားခြားနားသော themes များစွာကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ နောက်ခံပုံများ။
လျင်မြန်စွာရယူနိုင်သည့်ထိပ်မျက်နှာပြင်သည်နောက်ခံပုံများနှင့် themes များရွေးချယ်ခြင်း၊ ကာတွန်းအပြင်အဆင်များ၊ အကြိုက်ဆုံးအက်ပ်များနှင့်အဆက်အသွယ်များ၊ ဝစ်ဂျက်များ၊ မှန်နှင့်လက်နှိပ်ဓာတ်မီး၊ google launcher search box သို့လွယ်ကူစွာရောက်ရှိစေသည်။
ဤသည် beta launcher version ဖြစ်ပြီးသင်၏အကြံပြုချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ မိမိတို့၏အိုင်ကွန်များနှင့်သင်လိုချင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုရှင်သန်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းစာရင်းကိုအခမဲ့ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
Launcher အက်ပလီကေးရှင်းသည်တပ်ဆင်ထားသည့်ရာသီဥတုဝစ်ဂျက်များအတွက်လက်ရှိရာသီဥတုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြရန်နောက်ခံရှိတည်နေရာကိုရယူရန်လိုအပ်သည်၊ သင့်လျော်သောလည်ပတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ကိရိယာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့် application များနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့အတွက် - အိမ်မျက်နှာပြင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းခြင်း၊ အက်ပလီကေးရှင်းများကိုဖိုင်တွဲများထဲမှအုပ်စုဖွဲ့ခြင်း၊ မကြာခဏအသုံးပြုသောအသုံးချပရိုဂရမ်များ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက် https://osmino.com/docs/privacy/launcher တွင်ကြည့်ပါ
Osmino Launcher Live Icon|| beautiful luncher that will look different from your mobile
Sai Hein Thu Aung
Phyu Phyu Htay